Sidee Ay Tahay Taleefannada Hadha Awoodaha shaqeeya? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Sidee U shaqeeyaan Telefoonada Awoodda leh?
Waqtiga: 2020-07-01 Hits: 24
Teknolojiyada isgaarsiinta telefishanka ku shaqeeya waxay adeegsataa transduce-ka makaanikada si ay u bixiso isgaarsiinta codka maqalka hal silig iyada oo aan la isticmaalin quwadda dibedda ama batteriga. Cadaadiska codka ayaa soo saaray markii isticmaale la hadlo taleefanka gacanta/ gudbiyaha madaxa wuxuu abuuraa koronto loo diro aqbalaha kaasoo dib uguugu celinayo dhawaq. Taasina waa waxa kaliya ee looga baahan yahay in nidaamka lagu xoojiyo.
Shabakad telefishan cod leh ayaa had iyo jeer ah habka kaliya ee isgaarsiinta ee la heli karo inta lagu gudajiro awooda korantada sidaas darteedna waxaa lagu soo dhoweeyaa inay tahay isku xir xariir muhiim ah inta lagu guda jiro xaalada qalalaasaha ama xaalad kacsanaanta. Tusaale ahaan, daraasad ku saabsan weerarkii lagu qaaday USS Cole bishii Oktoobar 2000 ayaa ku soo gabagabeeyey inay khalad weyn ahayd in aan lahayn nidaam taleefan oo cod buuxa sida ay ku sameeyeen maraakiibta kale. Cole ayaa lumiyey awooddii oo dhan - iyo dhammaan isgaarsiintii - intii lagu jiray weerarka marka laga reebo nidaamka taleefanka ay ku shaqeeyaan. Waxay noqotay xaruntooda ugu weyn, iyo keliya, kanaalka isgaarsiinta.
Telefoonada codka leh waxaa sidoo kale loo isticmaalaa nidaamyada isgaarsiinta kumeelgaarka ah iyo tan joogtada ah dalal badan oo warshadaha iyo ganacsiga ah:
• Garoomada Diyaaradaha
• Shaqaalaha dab-damiska iyo booliska
• adeegyada dadweynaha
• marinnada dhulka hoostiisa
• dhirta qaboojiyaha
• difaaca shacabka
• Qalabaynta buundada
• Meelaha barafka lagu ciyaaro
• beeraha saliida
Jardiinooyinka iyo keymaha
• jidadka tareenka
• deyrarka badbaadada
• Goobaha isboortiga
Mashruucyada quusitaanka, iyo
• Hawlaha juquraafi ahaan meesha aan koronto laga heli karin.
Qalabka telefoonka ee codka leh wuxuu ku shaqeeyaa heerar koronto hooseeya. Tani waxay ka dhigeysaa mid kufiican astaamaha iyo shaqada budada, shaqooyinka gaaska, dhirta kiimikada, warshadaha saliida, miinooyinka iyo qodista, goobaha gantaalaha ballistic-ga, rakibaada nukliyeerka - ama deegaan kasta oo ubaahan qalabka “caddeynta qaraxda”.
Qalabka fudud, la qaadan karo, iyo cimilo-celinta, qalabka codka ku shaqeeya ayaa si raaxo leh loogu isticmaalaa gudaha-gudaha iyo dayactirka, dhismaha iyo hagaajinta, rakibaadda qandaraasyada korantada, tasiilaadka dadweynaha, raadiyaha, telefishanka, rakibaadda taleefanka iyo howlaha maraakiibta.
Hore: Maxay Qalabka Qalabka elektaroonigga ah badankood u adeegsadaan jaakadaha 3.5mm?
Xiga: Si loo Yareeyo Heerka Is-dilka --- Maxbuus Biritish ah ayaa ku dhejisay Taleefankeeda qolkiisa ka dibna samays Khadka Tooska ah